हजारको नोट बोक्नुभएको छ, होसियार ? नक्कली पर्ला नि !::kamananews
हजारको नोट बोक्नुभएको छ, होसियार ? नक्कली पर्ला नि !
४ कात्तिक काठमाडौं । दशैंको समयमा नयाँ नोटको प्रचलन बढी हुने गर्छ । यही क्रममा तपाईले एक हजार रुपैयाँका नयाँ नोटहरु बोक्नुभएको छ भने होस गर्नुहोला, त्यो नोट नक्कली पनि पर्न सक्छ । एक हजार रुपैयाँका साथै एक सय रुपैयाँको पनि नक्कली नोट बजारमा पुगेको हुन सक्ने प्रहरीले संकेत गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले आइबार राजधानीमा नक्कली नोट र त्यसका कारोबारीहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले नक्कली नेाटका बेही कारोबारीहरु त पक्राउ, गर्‍यो, तर बजारमा त्यस्ता नक्कली नोटहरु कति गइसकेका छन् भन्ने चाहिँ यकिन हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा तपाईको गोजीसम्म आइपुगेको नोट पनि नक्कली पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
नोट लिँदा नक्कली हो वा सक्कली हो एकिन गरेर मात्रै लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको सुझाव छ । यदि कसैले नक्कली नोट दिए तुरुन्तै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नक्कली नोट र सक्कली नोटमा धेरै फरक हुने भएकाले पनि छुट्याउन धेरै गाह्रो नहुने उनी बताउँछन् । ‘सक्कली नोट खस्रो हुन्छ । साथै अंकहरुसमेत केही उठेका हुन्छन्’ निरौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘छाम्दाखेरि चिल्लो छ र अंकहरु उठेका छैनन् भने त्यो नोट नक्कली हो ।’
नक्कली नोट छापेको आरोपमा पक्राउ परेका ईन्द्रबहादुर श्रेष्ठ पर्साको बिरुवा गुठी घर भई हाल मच्छेगाउँमा बस्दै आएका थिए । २७ वर्षे श्रेष्ठ यसअघि सिरहा जिल्लाबाट हात हतियार खरखजाना मुद्दामा ११ महिना जेल बसेर छुटेका व्यक्ति भएको प्रहरीको भनाइ छ । उनी नक्कली नोट छाप्ने प्रमुख योजनाकार रहेको प्रहरीको दाबी छ
>प्रहरीले श्रेष्ठको कोटाबाट रु. एक हजारका दरका नक्कली नोट ३७० थान बरामद गरेको छ । तर, छापिइसकेका कति नोट बजारमा पुगेका छन् भन्ने खुलिसकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
भारतमा यसैगरी नक्कली नोटको कारोबार र कालो धनको वृद्धि भएका कारण मोदी सरकारले नोटबन्दीको नीति ल्याएर पुराना नोटहरु खारेज गरेको थियो ।स्रोत :www.onlinekhabar.com